नेपालका ३ शक्तिसाली महिला जसले खोस्ने भारतसँग नेपाली भूमि …हेर्नुहोस सम्मान गरौ !
तर्कबहादुर थापा, काठमाडौं : राा’ष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपालको संविधान दोश्रो सं’शोधन वियेयक २०७७’ लाई प्रमा’णीकरण गरेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा २७४ को उप’धारा (१०) ब,मोजिम रा’ष्ट्रपतिले विधेयक प्रमा’णीकरण गरेको रा’ष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
भारतद्वा’रा अ,तिक्रमित नेपाली भू’मि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षे’त्रलाई समेटदै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेपछि सुरु भएको प्र’कृयाले रा¥ष्ट्रपतिले प्रमा’णीकरण गरेसँगै नेपालको न’क्साले संवैधा’निक मान्यता पाएको छ। जेष्ठ महिनाभरी प्र’कृयामा रहेपछि बिहीबारदेखी औ,पचारिक नेपालको न’क्साको मा’न्यता पाएको छ। निसान छा’पमा समेत नयाँ नक्सा रहेको छ।
नेपालको इतिहासमा २०७७ सालको जेठ महिनाले आफूलाई सु’रक्षित गरेको छ। भारतद्वा’रा अ,तिक्रमित भूमि फिर्ता गराएर नेपालका ३ जना महिलाले त्रि’देवी शक्ति देखाई जेष्ठ महिनासँगै आफूहरुलाई पनि इति’हास रच’नामा सामेल गरेका छन्।इति’हास र’च्ने अवसर बिरलै आउँछ। त्यस्तै विरलै अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओली ने,तृत्वको सरकारले प्राप्त गरेको छ।
कुनै पनि देशको सिमाना थ’पघट यु,द्धबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। विश्वमा सि’मानाका विषयमा ठूला ठूला यु,द्ध भएका छन्। त्यस्ता यु,द्धले कुनै मु’लुकको सी,मा बढाएका छन् भने कतिपय मुलु’कले आफ्नो सी’मा गु’माएका पनि छन्। तर नेपालले भने यु,द्ध नगरी मु’लुकको सी’मा ‘बढाएको छ।
भारतले लामो समयदेखि हडे’पेको नेपाली भू¥मि समेटेर सरकारले नक्शा जा’री गरेसँगै अब सो भू’मि फि’र्ता ल्याउने गरी सरकारलाई काम गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक द’लले आ,ग्रह गरेका छन्। त्यसका लागि भारतसँग वा’र्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि भारत तयार भएको छैन।
गत जेठ २ गते रा’ष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भारतद्वारा अ,तिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सरकार कटिव’द्ध भएको बताएकी थिइन्। उनले अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षे’त्र नेपालको भएको र यसलाई फि’र्ता ल्याउन सरकारले कु,टनीति पहल गर्ने बताएकी थिइन्।
लगतै जेठ ७ गते भू’मिव्यवस्थामन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेको नक्सा जा’री गरिन्। नयाँ नक्सा जारी गर्दै मन्त्री अर्यालले भनेकी थिइन्, ‘लामो समयपछि नेपालको सी’माका विषयमा रहेको स’मस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलु’कको इ’तिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग स’मेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्र’शासनिक) नक्सा सा’र्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौर’वान्वित र पु’ल्कित भएका छौं।
यसबारेमा पत्रकार सग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो नेपाल र नेपालीको गौ’रवको विषय हो, व्यक्ति भनेको नि’मित्त हुन्छ । बरु सम्माननीय प्रधान’मन्त्रीज्युले लिनुभएको ने,तृत्वको प्र’शंशा गर्नै पर्छ । तीनै महिला एक ठाउँमा हुनु संयोग मात्रै हो ।
भारतद्वारा अ,तिक्रमित भू’मि समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले ९ जेठमा संवि’धान संशोधन वि’धेयक प्रति’निधि सभामा पेस गरेकी थिइन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षे’त्रलाई समेटेर सरकारले जा’री गरेको नयाँ नक्साअनुसार संवि’धानको अनुसू’ची ३ मा रहेको निशान छा’प संशो’धनका लागि संविधान संशो’धन द’र्ता गरेकी हुन्।
जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभाले संसदमा द’र्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक स’र्वसम्मतिले पारित गर्यो। प्रति’निधिसभाका जम्मा २७५ सदस्य मध्ये जेठ ३१ गते संसदमा उपस्थित २५८ जनाले प’क्षमा मत’दान गरेका थिए। नेपाली इति’हासमा संविधान सं’शोधनमा संसदमा उपस्थित शतप्रतिशतले म’तदान गरेको पनि यो पहिलो इति’हास हो।
गणत’न्त्र नेपालको पहिलो संविधान २०७२ जारी हुँदा वि,वादित भए पनि दोस्रो संशोधन भने एति’हासिक भएको थियो। संविधान जा’री हुँदा वि,रोध गरेका तराई केन्द्रि’त द’लहरुले आफ्ना असन्तु’ष्टिलाई थाँति राखेर सी,माका विषयमा भएको सं¥शोधनमा एक’मत भएका थिए।
मधेस के’न्द्रित दलकी नेतृ चन्दा चौधरी पनि यो विषयमा सकारा’त्मक देखिन्छिन्। उनले भनिन्, ‘ मैले भन्ने गरेको छु, महिला कोमल हुन्छन क,मजोर हुदैँनन्। यो प्रमा’णित भएको छ। सं’योग हो तर, यदि सफल नभएको भए महिला भएकै कारण भएनकी भन्ने शंका टरेको छ।
राज्यले महिलालाई कुनैपनि जिम्मे’वारीबाट ब’न्चित गर्नु हुन्न भन्ने सन्दे’श हो यो। म खुसी पनि छु। काम सरकारले गरे पनि देखिने ठाउँमा महिला हुनु र ऐतिहा’सिक काम हुन आफैमा गौरवको कुरा हो।’ नेपालको संसदमा जेठ ३१ गते बसेको एकताको थ’पडिले दिल्लीमा भूँइ’चालो गयो। भारतीय सञ्चा’र माध्याममा को’लाहल भयो। नेपाली नेताहरुलाई भारतले पालनपोष’ण गर्दाको परि’णाम देखाएको भनि टि’प्पणी गरे, गरिरहेका छन्।
उनीहरुले नेपालमा गण’तन्त्र ल्याउनलाई भारतले धेरै नेता पालेको र नेपालको रा’जत्रन्त्र फा¥ल्नमा सहयो’ग गरेको पनि खुलेरै बोले। तर बोले पनि नेपाका दलहरुको एकताले त्यस्ता भनाईलाई फि|का तुल्या’इदियो।प्रतिनिधिसभाबाट सर्व’सम्मत पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक रा’ष्ट्रिय सभामा जेठ ३२ गते कानून मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले पेस गरिन्। उक्त विधेयक रा’ष्ट्रियसभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित गर्यो ।
रा’ष्ट्रिय सभाबाट विधेक पारित भएपछि कानून मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘यसलाई एउटा संयोग मान्नुहोस्। नेपालको अति’क्रमित जमिन फि’र्ता लिने कुरा सरकारको भए पनि निर्णय गर्ने ३ वटै ठाँउमा महिला छौं। नक्सा जारी गर्न भूमि’व्यवस्थामन्त्री, संसदमा पेस गर्न कानून मन्त्री तथा प्र’माणिकरण गर्न रा¥ष्ट्रपति तीनै जना महिला नै हुनु यो संयोग पनि हो।
नेपाल अं’ग्रेज यु’द्धको बेलामा भएको सुगौ’ली स’न्धिले २ सय ४ वर्ष पार गरेको छ। यती लामो इति’हासले नेपालको सीमा महा’काली न’दी पू”र्वको भाग भने पनि भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा आफ्नो अस्ति’त्व कायम गर्दै आएको थियो ।
नेपालको राजनीतिक नक्सामा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बाट बढेर १ लाख ४७ हजार ५ सय ७० पुगेको छ । यसरी त्रिदे’वीय शक्ति सं’योगले नेपालको नक्सा’मा जमिन थपिएको छ । हरेक नेपालीले स्वस्फु’र्त दिपावली गर्दै भनेका छन्, ‘जननी जन्म भू’मिश्च स्व’र्गादपि गरिएसी।